सिंगापुरे लाहुरेसंग विवाह गरेको २ महिनामै सोनीको मृ’त्यु : प्रेमिलाइ अ श्लि’ल फोटो पठाएको खुलासा, पूर्वप्रेमी संग पनि थियो सम्बन्ध ! (भिडियो हेर्नुस्) – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/सिंगापुरे लाहुरेसंग विवाह गरेको २ महिनामै सोनीको मृ’त्यु : प्रेमिलाइ अ श्लि’ल फोटो पठाएको खुलासा, पूर्वप्रेमी संग पनि थियो सम्बन्ध ! (भिडियो हेर्नुस्)
धरानमा विवाह गरेको दुई महिनामै युवतीको निधन भएको घटनामा थप नयाँ कुरा बाहिर आएको छ । दुई महिना अघि मात्र एक जना सिंगापुरका लाहुरेसंग विवाह गरेकी धरानकी सुनी लिम्बु निधन भएको अवस्थामा फेला परेकी हुन् । छोरीले देह त्याग गरिन् भनेर माइतीलाई खबर गरेपछि घरमा पुगेका माइतीका सदस्यले घटना संकास्पद रहेको बताएका छन् ।
घटना कसरी भयो भन्ने अझै खुलेको छैन । श्रीमानको परिवारले देह त्याग गरेको बताएका छन् भने माइती पक्षले शंकास्पद भन्दै किटानी जाहेरी दिएका छन् ।
तर श्रीमानका भिनाजुले सोनीको अन्य युवकसंग पनि सम्बन्ध रहेको दावी गरेका छन् । विवाह अघि पनि एक जना युवकसंग सोनीको सम्बन्ध भएको र त्यो कुरा श्रीमानलाई पनि थाहा भएको उनले बताएका छन् ।
युवकका परिवारले घटना भएको बेलामा घरमा हुँदै नभएकाहरुको नाममा पनि किटानी जाहेरी दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । सोनीको निधन हुँदा उनका दुई अमाजु घरमा थिएनन् । सोनीका माइती पक्षले उनीहरुको नाममा पनि किटानी जाहेरी दिएको भन्दै सोनीका श्रीमानका भिनाजुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रहरीले पोष्टमार्टम पछि मात्र घटना के भएको हो भनेर भन्न सकिने जनाएको छ ।
कोरोना संक्र`मणबाट नेपालमा तेस्रो व्य`क्तिको नि`ध`न भनिएका व्यक्ति सकु`सल रहेको पु`ष्टी (बिज्ञप्तिसहित)